မြန်မာဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာဘာသာစကားသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရုံးသုံး ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ဗမာလူမျိုးနှင့် ဗမာနွယ်ဝင်(ဓနု၊ အင်းသား၊ တောင်ရိုးနှင့် ယော)တို့၏ ဇာတိစကားဖြစ်သည်။ ဗမာလူမျိုးတို့သည် တိဘက်-ဗမာနွယ် ဘာသာစကားများ (Tibeto-Burman Languages) ပြောဆိုသည့် လူမျိုးနွယ်စုကြီးမှ အကြီးဆုံးသော လူမျိုးဖြစ်သည်။ လူဦးရေ ၃၈သန်းကျော်ခန့်သည် မြန်မာဘာသာစကားကို မိခင်ဘာသာစကား အနေဖြင့် သုံး၍ မြန်မာတိုင်းရင်သားများသည် ဒုတိယဘာသာစကား အနေဖြင့် သုံးသည်။
၃၉ သန်း (၂၀၂၁)
mya – ပါဝင်သော ကုဒ်
int – အင်းသား
tvn – ထားဝယ်စကား
tco – တောင်ရိုးစကား
rki – ရခိုင်ဘာသာစကား
rmz – မရမာဘာသာစကား
မြန်မာဘာသာစကားသည် တိဘက်-ဗမာနွယ် ဘာသာစကားများ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သည်။ တိဘက်-ဗမာနွယ် ဘာသာစကားများ အုပ်စုသည် တရုတ်-တိဗက်နွယ် ဘာသာစကားများ မိသားစု (Sino-Tibetan Languages Family) ထဲတွင် ပါသည်။ မြန်မာဘာသာသည် တက်ကျသံရှိသော (tonal) ၊ နိမ့်မြင့်အမှတ်အသားရှိ (pitch-register) ဖြစ်သော၊ ဧကဝဏ္ဏစကားလုံး (monosyllabic) အလွန်များသော ဘာသာစကား ဖြစ်သည်။ ကတ္တား-ကံ-တြိယာ စကားလုံးအစီအစဉ်ဖြင့် ရေးသော သရုပ်ခွဲဘာသာစကား (analytic language) လည်းဖြစ်သည်။ မြန်မာအက္ခရာများသည် ဗြာဟ္မီအက္ခရာ မှ ဆင်းသက်လာသည်။
၁.၁.၁ ဧရာဝတီ မြစ်ဝှမ်းဒေသ
၁.၂ အောက်မြန်မာပြည်တွင် ဘာသာစကားပျံ့နှံ့မှု
၁.၂.၁ ဧရာဝတီ မြစ်ဝှမ်းဒေသ၏ ပြင်ပ
၆.၁ Fonts supporting Burmese characters
မြန်မာဘာသာစကားသည် တရုတ်-တိဗက်နွယ် ဘာသာစကား မိသားစု ၏ ဗမာနွယ်ဘာသာစကားများ (Burmish languages) မှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ တရုတ်-တိဗက်နွယ် ဘာသာစကားများထဲတွင် တရုတ်နွယ် ဘာသာစကား (Sinitic) မဟုတ်သည့် ဘာသာစကားများတွင် သုံးစွဲသူ အများဆုံး ဘာသာစကား ဖြစ်သည်။ တရုတ်-တိဗက်နွယ် ဘာသာစကားများထဲ၌ မြန်မာဘာသာစကားသည် စာပေအရေးအသားစနစ် ပေါ်ထွန်းခဲ့ရာတွင် တရုတ်စာ၊ ပျူစာ၊ တိဗက်စာနှင့် တောင်ဂွတ်စာ တို့နောက် ပဉ္စမမြောက် ဖြစ်သည်။
ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း တစ်လျောက်တွင် နေထိုင်ကြသော မြန်မာစကား ပြောဆိုသူများသည် ကွဲပြားခြားနားမှု မပြောပလောက်သော စကားလုံးအသုံးအနှုန်း ကွာခြားမှုသာ ရှိသည်။ သို့သော် စံပြုမြန်မာစကားဖြင့် ကွာခြားသည့် ဒေသိယစကား ပြောဆိုသည့် လူနည်းစုများကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘေးအစွန် ဒေသများတွင် တွေ့ရသည်။ အဆိုပါ ဒေသိယစကားများမှာ
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး – ဘိတ်စကား၊ ထားဝယ်စကား၊ ပုလောစကား
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး – ယောစကား
ရှမ်းပြည်နယ် – အင်းသားစကား၊ တောင်ရိုးစကား၊ ဓနုစကား
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပြောဆိုကြသော ရခိုင်စကားနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင် ပြောဆိုကြသည့် မရမာစကား များအား မြန်မာ ဒေသိယစကားများအဖြစ် ယူဆကြသလို တခါတရံ သီးခြားဘာသာစကား များအဖြစ်လည်း ယူဆကြသည်။ ရခိုင်စကားသည် ရှေးဟောင်း မြန်မာစကားနှင့် အတူဆုံးဖြစ်သည် ([r] အသံသုံးသေးသည်)။ တနင်္သာရီတိုင်း၏သီးခြားစကားများမှာ သံရပ်ကိုတိုးသည်။ ထားဝယ်ဘာသာသည် [-l-] (ရှေးဟောင်းမြန်မာစာမှ အသုံးပြုသည်) အလယ်သုံးသေးသည်။ စကားအသုံးအနှုန်းနှင့် အသံထွက်များတွင် ကွာခြားမှု ရှိကြသော်လည်း ဗမာဘာသာစကား၏ ဒေသိယစကားများတွင် အပြန်အလှန် နားလည်နိုင်စွမ်း ရှိကြသည်။ အများအားဖြင့် နိမ့်မြင့်သံ လေးမျိုးရှိခြင်းနှင့် ဗျည်းသံများတူခြင်းနှင့် စာရေးသားရန် မြန်မာအက္ခရာများကိုသာ သုံးကြခြင်း စသည်တို့တွင် တူညီကြသည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး တို့တွင် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ပြောဆိုကြသော စံပြု မြန်မာစကားသည် ဧရာဝတီ မြစ်ဝှမ်းတွင် သုံးသော စကားများပင် ဖြစ်သည်။ အထက်မြန်မာပြည်နှင့် အောက်မြန်မာပြည်ကြားအဓိက စကားကွာခြားမှုမှာ အသံထွက်ကွာခြားခြင်း မဟုတ်ဘဲ စကားလုံးရွေးချယ်မှု ကွာခြားခြင်းဖြစ်သည်။ ဧရာတီမြစ်ဝှမ်းအတွင်း အသံထွက် ကွာခြားမှု အနည်းငယ် ရှိသည်။ ဥပမာ ရဟန်းသံဃာများကို ကပ်လှူသည့် ဆွမ်းကို အထက်မြန်မာပြည်က ဆွမ်း [sʰwáɴ] ဟု စာလုံးပေါင်းအတိုင်း အသံထွက်သော်လည်း အောက်မြန်မာပြည်တွင် ဆွန်း [sʰʊ́ɴ] ဟု အသံထွက်ပါသည်။ မန္တလေးတွင် ကျား၊ မ မရွေး မိမိကိုယ်ကို "ကျွန်တော်"ဟု ညွှန်းဆို ပြောကြားလေ့ရှိသည်။ ရန်ကုန်တွင်မူ ‘ကျွန်တော်’ကို အမျိုးသားများသာ သုံးကြပြီး အမျိုးသမီးများက "ကျွန်မ"ဟု သုံးနှုန်းသည်။ အထက်မြန်မာပြည်တွင် မိခင်နှင့် ဖခင်ဘက်မှ ဆွေမျိုးသားချင်းများကို ခွဲခြား ခေါ်ဝေါ်နေဆဲ ရှိပြီး အောက်မြန်မာပြည်တွင်မူ သိသိသာသာ ခွဲခြား ထားခြင်း မရှိပေ။ ဥပမာ အထက်မြန်မာပြည်တွင် ဖခင်၏ အမနှင့် ညီမအား အရီးကြီးနှင့် အရီးလေးဟု လည်းကောင်း၊ မိခင်၏ အမနှင့် ညီမအား ဒေါ်ကြီးနှင့် ဒေါ်လေးဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ အောက်မြန်မာပြည်တွင် ဒေါ်ကြီးနှင့် ဒေါ်လေးဟုသာ ခေါ်ဝေါ်သည်။
မြန်မာစကားသည် အထက်မြန်မာပြည်တွင် မြစ်ဖျားခံခဲ့သည် ဆိုသော်လည်း ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စံအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားသည့် လေယူလေသိမ်းနှင့် အသုံးအနှုန်းမှာ ရန်ကုန်မြို့မှ လေယူလေသိမ်းနှင့် အသုံးအနှုန်းများ ဖြစ်သည်။ ဤသို့ ဖြစ်ရသည်မှာလည်း ရန်ကုန်မြို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် မြို့တော်ဖြစ်လာသည်က တစ်ကြောင်း သတင်းမီဒီယာများ၏ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် တစ်ကြောင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် မင်းနေပြည်တော်မှာ မန္တလေးမြို့ဖြစ်သောကြောင့် ယခင်ကမူ မန္တလေးမြို့သူ မြို့သားများ ပြောကြားသည့် လေယူလေသိမ်းကို စံအဖြစ် ယူဆကြသည်။
မြန်မာစကား ပြောသူများ၊ အထူးသဖြင့် ဧရာဝတီ မြစ်ဝှမ်းတွင် နေထိုင်ကြသူများ ကြားတွင် အပြောစကားသည် မှတ်သားဖွယ်ရာပင် ညီညွတ်တူညီသည်။ အဓိကကျသော ပထမအကြောင်းအရင်းမှာ ရိုးရာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ပညာရေး စနစ်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းများသည် ပညာရေးကို များစွာ အားပေးပြီး စကားအပြောအဆို အရေးအသားကောင်းမွန် ညီညွတ်အောင် အလေးထား သင်ကြားပေးသည်။
ဗြိတိသျှတို့သည် မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးကို သိမ်းပိုက်ပြီး ငါးနှစ်အကြာတွင် တစ်ပြည်လုံး ကောက်ယူခဲ့သော သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကုန်းဘောင်မင်းဆက် နယ်မြေအတွင်း အမျိုးသားများ စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းများ ထူးခြားစွာ မြင့်မားနေပြီး ၆၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိသည်။ စာတတ်မြောက်မှု မရှိသေးသော လူနည်းစုလူမျိုးများရှိရာ တောင်ပေါ်ဒေသအချို့ကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြင်း မပြုလျှင် ထိုကိန်းဂဏန်းထက် ပိုမိုများမည်ဖြစ်ရာ ထိုခေတ်အခါအနေဖြင့် အလွန်မြင့်မားသော နှုန်းထားဖြစ်သည်။ အထက်မြန်မာပြည်မှ ဗမာမျိုးနွယ် ဗမာစကားပြောသူများ အောက်မြန်မာပြည်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်မှာ များစွာ မကြာသေးသော်လည်း အောက်မြန်မာပြည်တွက်လည်း ​ဗမာလူမျိုးများပျံ့နှံ့နေထိုက်ကြပြီး ၎င်းတို့ကို အောက်သားဟုခေါ်ကြသည်။ ၁၈ ရာစု အလယ်ပိုင်းအထိ အောက်မြန်မာပြည်တွင် မွန်လူမျို၊ ​ဗမာ နှင့်အခြာလူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီး ​ဗမာဘာသာစကားက လွှမ်းမိုးထားသည်။ ၁၇၅၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာစကားပြောသည့် ကုန်းဘောင်မင်းဆက်က ဟံသာဝတီပြည်ကို အနိုင်ရရှိပြီးနောက် စတင်၍ အောက်မြန်မာပြည်တွင် ဗမာစကားကိုသာ အဓိကထား သုံးစွဲလာကြသည်။ ၁၈၃၀ ခုနှစ်ရောက်သော အခါ ၎င်းဒေသတွင် နေထိုင်သူများ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဗမာ ဟု သတ်မှတ်ပြောဆိုကြသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ အထက်မြန်မာပြည်မှ ဗမာများ ပြောင်း ရွေ့လာခြင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ ကူးပြောင်းခြင်း၊ မွန်လူမျိုးများ ယိုးဒယားသို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ အပြန်အလှန်သွေးနှောခြင်းများကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်တွင် ဆန်ထုတ်လုပ်မှု အရှိန်မြှင့်လာခြင်း၊ အထက်မြန်မာပြည်တွင် နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု မရှိခြင်းများကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းမှုမှာ ပိုမိုများပြားလာခဲ့သည်။
ဧရာဝတီ မြစ်ဝှမ်းဒေသ၏ ပြင်ပ
ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းနှင့် ပိုမိုဝေးကွာလေ ဒေသိယစကားများသည် စံပြုမြန်မာဘာသာစကားနှင့် ပိုမိုဝေးကွာလေဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ ယောစကား၊ ပလောစကား၊ ဘိတ်စကား၊ ထားဝယ်နှင့် အင်းသားစကားတို့ ဖြစ်သည်။ စကားအသုံးအနှုန်းနှင့် အသံထွက်ပုံတို့ များစွာ ကွဲပြားသော်လည်း ဒေသိယစကားများသည် တစ်ခုနှင့် တစ်ခု အပြန်အလှန်လေ့လာနားလည်နိုင်စွမ်း ရှိကြသည်။ အထူးသဖြင့် တနင်္သာရီ ဒေသရှိ စကားများသည် စံပြုမြန်မာစကားနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပို၍ ရှေးဆန်သည်။ ရှေးဟောင်း မြန်မာစကားတွင်သာ တွေ့ရသော (လဆွဲ – ဥပမာ – အ္လ ) သံသည် စံပြုမြန်မာစကားတွင် မရှိတော့သော်လည်း ထားဝယ်စကားနှင့် အင်းသားစကားများတွင် ကျန်ရှိနေသေးသည်။ ဘိတ်စကားပြောသူများမှာ ၂၅၀၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး ထားဝယ်စကား ပြောသူများမှာ ၄၀၀၀၀၀ ခန့် ရှိသည်။
ရခိုင်စကားတွင် အထင်ရှားဆုံးမှာ ရှေးမြန်မာစကားမှ မပြောင်းလဲပဲ ကျန်ရှိနေသော "ရ" သံ [ɹ]ဖြစ်သည်။ ၎င်းအသံသည် ခေတ်ပေါ် စံပြုမြန်မာစကားတွင် "ယ" သံ [j] အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပြီ ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုမှာ 'ဧ' သရသံနှင့် 'ဣ' သရသံတို့ ပေါင်းစပ်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စံပြုမြန်မာစကားတွင် 'ခွေး' ဆိုသော အသံသည် ရခိုင်စကားသံအားဖြင့် "ခွီး" ဟု အသံထွက်ပါသည်။
မြန်မာဘာသာစကားတွင် အသုံးမူကွဲ နှစ်မျိုးရှိသောကြောင့် စုံတွဲဘာသာစကား (Diglossia) ဖြစ်သည်။
စာပေဟန် – အမြင့်(မြန်မာစာ) → စာကြီးပေကြီးရေးသားခြင်း၊ သတင်းစာများ၊ အစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာ ရုံးစာများ၊ ရုပ်သံ ရေဒီယို သတင်းကြေညာခြင်း၊ မိန့်ခွန်းပြောခြင်း စသည်တို့တွင် သုံးနှုန်းသည့် ပုံစံ ဖြစ်သည်။
စကားပြောဟန် – အနိမ့် (မြန်မာစကား) → နေ့စဉ်သုံး စကားပြောဆိုသောပုံစံ၊ သာမန်ရုပ်သံအစီအစဉ်များ၊ ကာတွန်း/ဝတ္ထုများ စသည်တို့တွင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြောဆိုနေကြသည့် ပုံစံ ဖြစ်သည်။
မြန်မာ စာပေပုံစံသည် သာမန်အားဖြင့် အသုံးမရှိတော့သည့် ရှေးရိုးဆန်သော သဒ္ဒါဆိုင်ရာ စကားလုံးများ (ဥပမာ – ပစ္စည်း၊ဝိဘတ်၊ နာမ်စား၊ သမ္ဗန္ဓ) ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသုံးစွဲလျက် ရှိသည်။ အများအားဖြင့် အရေးပုံစံတွင် သုံးနှုန်းနေသော သဒ္ဒါဆိုင်ရာ စာကားလုံး တို့သည် မြန်မာစကားပြောပုံစံတွင်ရှိသော သဒ္ဒါဆိုင်ရာ စာကားလုံးတို့ဖြင့် လုံးဝ ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ဥပမာ –
နာမ်စား – (မြန်မာစာ အသုံး) ဤ → (မြန်မာစကား အသုံး) ဒီ
နာမ်စား – (မြန်မာစာ အသုံး) ထို → (မြန်မာစကား အသုံး) ဟို
ဝိဘတ် – (မြန်မာစာ အသုံး) ၌ → (မြန်မာစကား အသုံး) မှာ
ပစ္စည်း – (မြန်မာစာ အသုံး) များ → (မြန်မာစကား အသုံး) တွေ
ပစ္စည်း – (မြန်မာစာ အသုံး) ၏ → (မြန်မာစကား အသုံး) ရဲ့
သမ္ဗန္ဒ – (မြန်မာစာ အသုံး) နှင့် → (မြန်မာစကား အသုံး) နဲ့
သမ္ဗန္ဒ – (မြန်မာစာ အသုံး) လျှင် → (မြန်မာစကား အသုံး) ရင်
စကားပြောဟန်သည် လေးနက်မှု၊ အာဏာခွန်အားနှင့် ခန်းနားထည်ဝါမှု မရှိသောကြောင့် သမိုင်းကြောင်းအားဖြင့် စာရေးသားခြင်းအတွက် စာပေဟန်ကို ပို၍သုံးခဲ့ကြသည်။ ၁၉၆၀ ကျော်အလယ်ပိုင်းနှစ်များမှ စတင်၍ အချို့သော မြန်မာစာရေးဆရာများသည် စာပေဟန်ကို ဖျောက်ဖျက်ပြီး စကားပြောဟန်ဖြင့် အစားထိုးရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ မင်းလတ် ကဲ့သို့ မြန်မာ ဘာသာဗေဒပညာရှင် အချို့က စာပေဟန်မှ ခွဲထွက်ရန်အတွက် အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ စာရေးသားတဲ့အခါမှာ စာပေဟန်ကို အတော်များများ အသုံးပြုနေကြ သော်လည်း များမကြာမီကစတင်ပြီး ဟိတ်ဟန်မလိုတဲ့ စာရေးသား ခြင်းကိစ္စတွေမှာ စကားပြောဟန်ကို အသုံးပြုခြင်းဟာ ခေတ်စားလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့အခါမှာတော့ ရုပ်သံသတင်း၊ ရုပ်ပြစာအုပ်၊ ကြော်ငြာအရေးအသား စသည့် ကိစ္စတွေမှာ စကားပြောဟန် သို့မဟုတ် ပိုမိုရိုးရှင်းပြီး ပေါ့ပါးတဲ့ စာရေးဟန်တွေကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနေကြပြီ ဖြစ်သည်။
အပြောစကားမှ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှု အဆင့်အလိုက် စကားလုံးသတ်မှတ်ချက်များနှင့် စကားပြောသူတွေရဲ့ အသက်အရွယ်၊ ဆွေမျိုးတော်စပ်မှု စသည့် အနေအထားအရ အရိုအသေပြု ခေါ်ဝေါ်ရတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ ရှိသည်။ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုကို ပြသရန်အတွက် "ပါတယ်"၊ "ပါခင်ဗျ" စသည့် ဝိဘတ် များကို မကြာခဏ အသုံးပြုကြသည်။ နာမ်စားတွေမှာလည်း အသုံးပုံစံ အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဆရာ/ဆရာမ၊ အရာရှိ၊ အသက်ကြီးသူ စသည့်သူများအား ခေါ်ဝေါ်ရန်အတွက် ယဉ်ကျေးတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းပုံစံတွေ သတ်မှတ်ထားရှိသည်။ ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုရေးသားတဲ့ အသုံးအနှုန်းများသည်လည်း သာမန် နေ့စဉ်သုံး စကားပြော အသုံးအနှုန်းများဖြင့် များစွာ ကွာခြားသည်။
သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုမှာ မြန်မာဘာသာစကားတွင် အသံအနိမ့်အမြင့်ပြောင်းလျှင် စကားလုံးအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ တက်ကျသံကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် tone ဟုခေါ်သည်။ က၊ ကာ၊ ကား၊ လု၊ လူ၊ လူး၊ ပန့်၊ ပန်၊ ပန်း စသည်ဖြင့် အသံအတက်အကျ ပြောင်းခြင်းသည် တက်ကျသံပြောင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ က၊ ကာ၊ ကား ဟူသော စကားလုံးသုံးလုံးသည် ဗျည်းလည်းတူသည်၊ သရလည်းတူသည်၊ တက်ကျသံသာကွဲပြားသည်။ တက်ကျသံကွဲပြားသည်သာမက စကားလုံးတစ်လုံးစီ၏ အဓိပ္ပာယ်လည်း ကွဲပြားသွားသည်။
အထက်ပါဝါကျများတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း တက်ကျသံပြောင်းပြောရုံဖြင့် အဓိပ္ပာယ်များ ပြောင်းသွားသည်။ ဤဘာသာစကားမျိုးကို တက်ကျသံဘာသာစကားဟု ခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာဘာသာစကားသည် တက်ကျသံဘာသာစကားဖြစ်သည်။
ဤအပိုင်းတွင် နိုင်ငံတကာ အသံထွက်သင်္ကေတ (နိုင်ငံတကာ သဒ္ဒဗေဒအက္ခရာ) များကိုအသုံးပြုထားခြင်းများပါဝသ်သည်။
အောက်ပါတို့သည် ဗျည်းများဖြစ်ကြ၍ ဗျည်းစစ်စစ်ကို ပုံဖော်ရာ၌ "က်၊ ခ်၊ ဂ်..." ဟုရေးသားရသော်လည်း အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဖတ်ရှုမှု လွယ်ကူစေရန် "က၊ ခ၊ ဂ..." ဟူ၍သာ ဇယားများထဲ၌ ဖော်ပြထားသည်။
မ (m) န (n) ည (ɲ) င (ŋ)
မှ (m̥) နှ (n̥) ညှ (ɲ̊) ငှ (ŋ̊)
ဘ (b) ဒ (d) ဂျ (dʒ) ဂ (ɡ)
ပ (p) တ (t) ကျ (tʃ) က (k) ပြစရာမရှိ၊ ရပ်သံကို ညွှန်းသည်။ (ʔ)
ဖ (pʰ) ထ (tʰ) ချ (tʃʰ) ခ (kʰ)
ဿ (ð) ([d̪ð~d̪]) ဇ (z)
သ (θ) ([t̪θ~t̪]) စ (s) ရှ (ʃ)
ဆ (sʰ) ဟ (h)
သရရွေ့ (သရတစ်ပိုင်း ဗျည်းတစ်ပိုင်း)
လ (l) ယ (j) ဝ (w)
လှ (l̥) ဝှ (ʍ)
ဂျန်နီနှင့် စန်းစန်းနှင်းထွန်း (Jenny & San San Hnin Tun (2016:15)) တို့အရ 'သ' ၏ သင်္ကေတဖြစ်သော θ နှင့် ð တို့သည် ပွတ်တိုက်ဗျည်းများ (/θ, ð/) များဖြစ်ကြ၍ ထိုသင်္ကေတများနေရာ၌ သွားဌာန်ရပ်သံများဖြစ်သော (/t̪, d̪/) ကိုသာသုံးသင့်သည်ဟု ဆိုသည်။
(သရရွေ့) သွားရင်းဗျည်း 'ရ်' (/ɹ/) သည် မွေးစားစကားလုံးအချို့တွင် 'ယ်' နေရာ၌ အစားထိုး(တူညီသော) ဗျည်းဖြစ်နိုင်သည်။
​နောက်ဆုံးနှာသံ /ɰ̃/ သည် မူရင်းနောက်ဆုံးနှာသံ လေးခုဖြစ်သော ⟨မ်⟩ /m/, ⟨န်⟩ /n/, ⟨ဉ်⟩ /ɲ/, ⟨င်⟩ /ŋ/ တို့နှင့် လျှာဖျားကော့ဗျည်း ⟨ဏ⟩ /ɳ/ (ပါဠိစာလုံးများ၌သုံးစွဲ) အတွက် အစားထိုးရေးသားနိုင်ကာ နှာသံပြုသင်္ကေတ သေးသေးတင် (ံ) သည် က→ကံ ဟု နှာသံပြရာတွင်သုံးစွဲကြ၍ အများအားဖြင့် နှာသံလယ်နေရာကို အစားထိုးနိုင်လေသည်။ ဥပမာ တံခါး (တန်ခါး, tankhá) ၊ တံတား (တန်တား, tantá) တို့နှင့် ပါဠိနှင့် မူရင်းမြန်မာစကားရှိ ⟨မ်⟩ ကိုလည်း အစားထိုးနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် ငံ (ငမ်, ngam) ၊ သုံး (သုမ်း, thóum) ၊ ဆုံး (ဆုံးမ်, sóum) တို့ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်လည်း 'ည်' နေရာကိုမူ အစားမထိုးနိုင်ပေ။ 'ည' ကို နှာသံအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုထားသောကြောင့်ဖြစ်ကာ 'ည်' သည် အရှေ့အဖွင့်/ပွင့် သရများဖြစ်သော အီး ([iː])၊ အဲ ([eː]) (သို့) အေး ([ɛː]) တို့နှင့် ပို၍ နီးစပ်သည်။
နောက်ဆုံးနှာသံကို သရ၏နှာသံအဖြစ် သတ်မှတ်ယူဆကြသည်။ သံရင်းမျိုးပြားအရ 'လေလမ်းကြောင်းပိတ်ရပ်သံများ'၏ အရှေ့တွင် နှာသံအဖြစ်တည်ရှိနိုင်သည်။ သာဓကပြရလျှင် မုန်တိုင်း (မုန်ဒိုင်း) ကို သဒ္ဒဗေဒပုံစံဖြင့် /mòʊɰ̃dáɪɰ̃/ ဟုရေးသားထားသည်ကို အသံထွက်ကြသည်မှာ [mõ̀ũndã́ĩ] အဖြစ် အသံပြုကြလေသည်။
အီ (i) အူ (u)
အေ (e) အို (o) အေအီ (eɪ) အိုအွတ် (oʊ)
အယ် (ɛ) အော (ɔ)
အာ (a) အာအစ် (aɪ) အာအွတ် (aʊ)
သရတွဲများကို ပြသရာ၌ တစ်လုံးချင်းစီ၏ အသံကို ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအသံနှစ်ခုသည် ပူးပေါင်း၍ လျင်မြန်စွာရွတ်ဆိုရသည်။ ဥပမာ : /eiʔ/ ဆိုလျှင် အိတ်/အိပ် ၊ /ouʔ/ ဆိုလျှင် အုတ်/အုပ် ၊ /aũ/ ဆိုလျှင် အောင် စသဖြင့်ဖြစ်၏ ။
မြန်မာဘာသာ သံနေသံထားဘာသာဖြစ်တော့ phonemic ခြားနားချက် သရအသံပေါ်မှာမူတည်သည်။ မြန်မာဘာသာမှာ အသံခြားနားချက်များက လေသံ၊ phonation၊ အသံအ‌ရှိန်၊ အဓွန့်၊ နှင့် သရအရည် အားလုံးပေါ်မှာလည်းမူတည်သည်။ အသံခြားနားချက်လေးခုရှိသည်။
နမူနာမှာ ‌အသံတွေစကားလုံများ၏ အဓိပ္ပယ်ပျောင်းသည်။
နိမ့်သံ /kʰà/ (ခါ)
တက်သံ /kʰá/ (ခါး)
သက်သံ /kʰa̰/ (ခ)
တိုင်သံ /kʰaʔ/ (ခတ်)
/N/ ပါတဲ့ဝဏ္ဏမှာ တိုင်သံမပါဘူး။
နိမ့်သံ /kʰàN/ (ခံ)
တက်သံ /kʰáN/ (ခန်း)
သက်သံ /kʰa̰N/ (ခန့်)
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါးများ - မြန်မာအက္ခရာ နှင့် မြန်မာအက္ခရာသမိုင်း
မြန်မာဝေါဟာရ အများစုသည် တိဗက်-ဗမာနွယ် ဘာသာစကားများ (Tibeto-Burman) စကားမျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်ပြီး ဧကဝဏ္ဏစကားလုံး(monosyllabic) ဘာသာစကား ဖြစ်သည်။ ။ သို့ပေမဲ့ အချို့ဝေါဟာရများ အထူးသဖြင့် မွေးစားဝေါဟာရများမှာမူ အသံ တစ်သံထက် ပိုထွက်လေ့ရှိသည်။ မွေးစားဝေါဟာရများမှာ များသောအားဖြင့် နာမ် ပုံစံနများ ဖြစ်ကြသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ကျမ်းစာပေ ဘာသာစကားဖြစ်သော ပါဠိဘာသာစကားသည် မြန်မာဘာသာစကားအပေါ် အထူးလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းအား ဗုဒ္ဓဘာသာက အထူးလွှမ်းမိုးခြင်း၊ မြန်မာဘာသာစကားနှင့် ပါဠိဘာသာစကားကြား ဆင်တူသည့် အသံထွက်စနစ် ရှိခြင်း၊ မြန်မာစာရေးစနစ် ကိုအသုံးပြု၍ ပါဠိဘာသာစကားကို လုံးဝတိတိကျကျ ရေးသားနိုင်ခြင်း စသည့်အချက်များကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပါဠိမှ ဆင်းသက်လာသော မွေးစားစကားလုံးများသည် ဘာသာတရား၊ အစိုးရ၊ ဝိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံ တို့နှင့် ဆက်နွယ်လေ့ ရှိသည်။ ပါဠိစကားလုံးများကို မွေးစားရာတွင် ပုံစံ လေးမျိုးဖြင့် မွေးစားသည်။
တိုက်ရိုက်မွေးစားခြင်း – ပါဠိစကားလုံးအား မူရင်း ပါဠိအတိုင်း ယူသုံးသည်
ပါဠိဘာသာစကားဖြင့် "ဒေါသ" → မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် "ဒေါသ"
ပါဠိဘာသာစကားဖြင့် "လောဘ" → မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် "လောဘ"
အတိုကောက်မွေးစားခြင်း – ပါဠိစကားလုံးအား အတိုချုံ့၍ ယူသုံးသည်
ပါဠိဘာသာစကားဖြင့် "ကမ္မ" → မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် "ကံ"
ပါဠိဘာသာစကားဖြင့် "အရုဏ" → မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် "အာရုဏ်"
ပါဠိဘာသာစကားဖြင့် "ကုသလ" → မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် "ကုသိုလ်"
နှစ်ခါမွေးစားခြင်း – မူရင်းပါဠိစကားလုံးအား မတူညီတဲ့ မြန်မာစကားလုံးနှစ်မျိုးအတွက် ယူသုံးသည်
ပါဠိဘာသာစကားဖြင့် "မာန" → မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် "မာန" နှင့် "မာန်"
ပေါင်းစပ်မွေးစားခြင်း – မြန်မာစကားလုံးနှင့် ပါဠိစကားလုံးများအား ရောစပ်၍ စကားလုံးအသစ် တီထွင် အသုံးပြုသည်
လေယာဉ်ပျံ – လေ←(မြန်မာစကားလုံး) + ယာဉ်←(ပါဠိစကားလုံး) + ပျံ←(မြန်မာစကားလုံး)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မွေးစားစကားလုံးများသည် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၊ တိုင်းတာ ခြင်တွယ်ခြင်း၊ ခေတ်သစ် ပညာရပ်များနှင့် ဆက်နွယ်သည်။
မွန်ဘာသာသည် မြန်မာဘာသာအပေါ် လွှမ်းမိုးမှု မရှိသောကြောင့် မွန်ဘာသာမှ မွေးစားထားသော ဝေါဟာရများနှင့် မြန်မာ ဝေါဟာရများကို ခွဲခြားနိုင်ရန် ခဲယဉ်းလှသည်။
သင်္သကရိုက်ဘာသာ (ဘာသာတရား)၊ တရုတ်ဘာသာ (ကစားနည်းနှင့် အစားအသောက်) နှင့် ဟိန္ဒီဘာသာ (အစားအသောက်၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး) မွေးစားစကားလုံးများကိုလည်း တွေ့ရသည်။
တစ်ခြားဘာသာများမှ မွေးစားထားသည့် မြန်မာဝေါဟာရများလည်း ရှိသေးသည်။
နံပါတ် (မွေးစားစကာလုံ၊ နာမ်မှ)
ဒုက္ခ ([doʔkʰa̰]) – ပါဠိ "dukkha"
ရေဒီယို ([rèdìjò]) – အင်္ဂလိပ် "radio"
စနစ် ([səniʔ]) – မွန် "စ္နတ်‌"
ကော်ပြန့် ([kɔ̀pja̰n]) – အင်္ကျီတို (ဖူကျန့်) တရုတ် 潤餅 (jūn-piáⁿ)
ဇနီး ([zəní]) – ဟိန္ဒီ पत्नी (jani)
ခေါက်ဆွဲ ([kʰaʊʔ sʰwé]) – ရှမ်း "ၶဝ်ႈသွႆး"
ပေ ([pè]) – ပေါ်တူဂယ် pé
အလံ ([əlàn]) – အာရပ် alam
Burmese/Myanmar script and pronunciation at Omniglot
Myanmar Unicode Character Picker Archived9December 2012 at Archive.is
Myanmar Unicode Implementation Public Awareness Archived2January 2014 at the Wayback Machine.
Myanmar3 keyboard layout Archived 17 September 2008 at the Wayback Machine.
myWin2.2 Archived 20 August 2008 at the Wayback Machine.
Fonts supporting Burmese characters
Burmese Wikipedia:Font page
Burmese Unicode & NLP Research Centre Archived9February 2006 at the Wayback Machine.
Parabaik Myanmar Unicode Project GPLed and OFLed Archived9February 2008 at the Wayback Machine.
Myanmar-English Unicode dictionary
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Southern Burmish"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ မောင်ခင်မင် (ဓနုဖြူ) (မေ ၂၀၀၉). "မြန်မာဘာသာစကား၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ". ပညာတန်ဆောင်မဂ္ဂဇင်း အတွဲ ၅၈၊ အမှတ် ၅.
↑ Chang (2003), p. 63.
↑ Watkins (2001).
↑ Jenny & San San Hnin Tun 2016, p. 15.
Becker၊ Alton L. (1984)။ "Biography ofasentence: A Burmese proverb."။ in E. M. Bruner (ed.)။ Text, play, and story: The construction and reconstruction of self and society။ Washington, D.C.: American Ethnological Society။ pp. 135–55။
Bernot၊ Denise (1980)။ Le prédicat en birman parlé (ပြင်သစ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Paris: SELAF။ ISBN 2-85297-072-4။
Cornyn၊ William Stewart; D. Haigh Roop (1944)။ Outline of Burmese grammar။ Baltimore: Linguistic Society of America။
Cornyn၊ William Stewart; D. Haigh Roop (1968)။ Beginning Burmese။ New Haven: Yale University Press။
Green၊ Antony D. (2005)။ "Word, foot, and syllable structure in Burmese."။ in J. Watkins (ed.)။ Studies in Burmese linguistics။ Canberra: Pacific Linguistics။ pp. 1–25။ ISBN 0-85883-559-2။
Okell၊ John (1969)။ A reference grammar of colloquial Burmese။ London: Oxford University Press။
Roop၊ D. Haigh (1972)။ An introduction to the Burmese writing system။ New Haven: Yale University Press။
Taw Sein Ko (1924)။ Elementary handbook of the Burmese language။ Rangoon: American Baptist Mission Press။
Watkins, Justin W. (2001). "Illustrations of the IPA: Burmese". Journal of the International Phonetic Association 31 (2): 291–95. doi:10.1017/S0025100301002122.
Wheatley၊ Julian K. (1987)။ "Burmese."။ in B. Comrie (ed.)။ Handbook of the world's major languages။ Oxford: Oxford University Press။ pp. 834–54။ ISBN 0-19-520521-9။
Patricia M Herbert; Anthony Milner, eds. (1989)။ South East Asia Languages and Literatures: Languages and Literatures: A Select Guide။ University of Hawaii Press။ ISBN 0-8248-1267-0။
Waxman, Nathan (2014). "The Naturalization of Indic Loan-Words into Burmese: Adoption and Lexical Transformation". Journal of Burma Studies 18 (2): 259–290. doi:10.1353/jbs.2014.0016.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာဘာသာစကား&oldid=743767" မှ ရယူရန်
၁၆ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၆:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၆:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။